Nin U Dhashay Dalka Maraykanka Oo Sheegtay In Uu Yahay Boqorka Ingiriiska | Saxil News Network
Nin U Dhashay Dalka Maraykanka Oo Sheegtay In Uu Yahay Boqorka Ingiriiska
Nin u dhashay dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Allan V. Evans, ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in uu yahay booqorka saxda ah ee dalka Ingiriiska, kaas oo uu sabab u dhigay in uu ka dhaxlay qoyskooda oo asal ahaan ka soo jeeda welesh.
Waxa uu intaasi ku daray in boqornimadan uu ka dhaxlay qoyskooda qarnigii 3aad, waxaanu sidaasi ku sheegay war uu siiyay wargeyska Times.
Mr. Alan oo ka soo jeeda Colorado ayaa intaasi ku daray in dhaxalka uu u helay boqornimada isla markaana uu isu aqoonysan yahay boqorka dalka ingiriiska.
Sidoo kale wargeyska Daily Mirror ayaa isna soo qoray in aanay ahayn markii ugu horeysay ee uu alan sheegto in uu yahay boqorka dalka ingiriiska, hasayeeshee sanadkii 2012-kii ayuu sidan oo kale u baahiyay in uu yahay boqorka saxda ah ee dalka ingiriiska.
Wakhtigaas waxa kale oo uu xusay in uu iska leeyihiin dhulka ay degan tahay boqorada dalka ingiriiska, hasayeeshee mar dambe ayaa hadana waxa uu xusay in dab qabsaday gurigoodii uu galaaftay cadaymo badan oo uu gar ku yeelan lahaa.